Myanmar Idol Season3ရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲဝင္တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ နီလန္းဟာဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြခ်စ္ခင္အားေပးရတဲ့ အဆိုရွင္ တစ္ဦးပါ။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခဲ့ စဥ္က သူမ ရဲ႕ေကာင္းလြန္းလွတဲ့ အသံပါဝါနဲ႔ ေခ်ာေမာလွပတဲ့မ်က္ႏွာေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာေၾကာင့္ သူမကို ခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္အခိုင္အမာရရွိထားၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ပရိသတ္ေတြအတြက္ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ခ်စ္သူနဲ႔ အမွတ္တရ ပံုေလးေတြကို ဖ်က္ပစ္သင့္ၿပီလားလို႔ ေမးလာတဲ့ အဆိုေတာ္ နီလန္း မေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
နီလန္း ေျပာထားတဲ့ အေၾကာင္းကို ပရိသတ္ေတြသိရေလာက္ၿပီ ထင္ပါတယ္။ ၾကည့္ရူေပးၾကတဲ့ပရိသတ္ႀကီးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ေနာ္။ မိုမိုေလး
Myanmar Idol Season3ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် နီလန်းဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အဆိုရှင် တစ်ဦးပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ စဉ်က သူမ ရဲ့ကောင်းလွန်းလှတဲ့ အသံပါဝါနဲ့ ချောမောလှပတဲ့မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် သူမကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ချစ်သူနဲ့ အမှတ်တရ ပုံလေးတွေကို ဖျက်ပစ်သင့်ပြီလားလို့ မေးလာတဲ့ အဆိုတော် နီလန်း မကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
နီလန်းက ” ပျော်ပါတော့ ” ဆိုတဲ့ သီချင်း MV လေးကို ထွက်ရှိထားတာ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့အသဲကွဲ သီချင်းလေးက ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးခဲ့သလို လောကကြီးကထွက်ခွါသွားတဲ့ ချစ်သူနဲ့ သူမ အကြောင်းပုံဖော်ထားတဲ့ ” ရူးတော့မယ် ” MV လေးကလည်း ပရိသတ်တွေကြားနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။
နီလန်းက သူမရဲ့ ချစ်သူ နဲ့ အတူရှိစဉ် ကြည်နူးပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ အမှတ်ရ ပုံလေးတွေကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ နီလန်းက သူမ တို့ရဲ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖျက်ပစ်သင့်ပြီလားလို့ ခုလို ပြောထားတာပါ။
နီလန်း က ” သိမ်းထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ဖျက်သင့်ပြီလား?ဆက်သိမ်းထားရမှာလား? 😰ဖျက်ရတော့မှာလား? 😰ဘာလုပ်ရမှာလဲ?” ဆိုပြီး ပြောထားတာပါ။
နီလန်း ပြောထားတဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေသိရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရူပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။ မိုမိုလေး
အျပင္သြားရင္ ထီးယူသြားၾကဖို႔ ပရိသတ္ေတြကို စိတ္ပူေပးလိုက္တဲ့ ေအသင္ခ်ိဳေဆြရဲ႕သမီးေလး
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေစ်းဝယ္ထြက္ခဲ့တဲ့ ေနျခည္ဦး